Tareenka Labada Xaram oo sannadkan qaadaya 150 kun oo Xujay ah - Jigjiga Online
HomeDiintaTareenka Labada Xaram oo sannadkan qaadaya 150 kun oo Xujay ah
Tareenka Labada Xaram oo sannadkan qaadaya 150 kun oo Xujay ah
Maanta oo Jimce ahayd, oo ku aaddanayd 8-da bisha Dil Xijah, ayaa ku dhawaad laba malyan oo qof waxay gudanayaan waajibaadka Xajka, waana maalinta loo yaqaan Yawmu Tarwiyah. Dadka xajinaya ayaana ka amba baxaya maalada Makkah ayagoo sii maraya Mina ugana sii gudbaya Carafa, halkaas oo la istaagi doono barri oo Sabti ah.
Marka laga yimaado dadka ka soo xajiyey gudaha Sucuudiga, waxaa dibadda Xajka ka soo aaday dad kor u dhaafay hal malyan iyo 800 oo qof oo gudanaya tiirka shanaad ee ka midka ah tiirarka Islaamka.
Masuuliyiinta Sucuudiga ayaa sannadkaan soo kordhiyey tareen xawaare sare ku soconaya oo ay u bixiyeen “tareenka dheereeya ee labada Xaram” kaas oo isku xiraya labada magaalo ee barakaysan ee Makkah iyo Madina, sidoo kale xujayda u qaadaya goobaha barakaysan sida Mina, Carafa iyo Mustalifa, asagoona sii maraya buundada dhagax tuurka.
Mashruuca tareekan oo ka kooban 35 tareen, ayaa looga golleeyahay in lagu qaado xujay kor u dhaafaysa 150 xaaji, wuxuuna galayaa 64 safar toddobaadkan, tareenkan ayaana ka kooban 417 kursi.
Mashruucan ayaa looga golleeyahay in lagu fududeeyo safarka iyo isu socodka Xujayda, iyo in laga fududeeyo daalka iyo cidhiidhiga oo marar badan ay ku dhintaan dad boqolaal qof gaaraya, gaar ahaan marka dhagax tuurka lagu jiro.
Mashruucaan oo Shiinuhu uu hirgaliyey sanadihii 2009 iyo 2010 ayaa waxaa ku baxay 1.8 bilyan oo dollar.
Waajibaadka Xajka ayaa sannad kasta bilowda 8-da bisha Dil Xijah waxayna socdaan tan iyo 13-ka ee isla bishaas.
Madaxweyne Xaaf oo ka tanaasulay doorashada madaxtinimada Galmudug
Shacabka Ruushka oo ay cabsi soo food saartay ka dib markii uu qarxay Gantaal halis ah